Zonke iinkcukacha malunga neChrishell Stause's Net Worth - Ukuzonwabisa
Abaphumeleleyo Ukulungiswa Kwangoko Gynaec Impilo Yengqondo Ngamazwe Impilo Celeb Jonga Unyango Lwasekhaya Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Izixhobo
Yintoni iChrishell Stause yeNet efanelekileyo? Yonke into esiyaziyo malunga nokuThengiswa kwelanga leNkanyezi 'yokuthengisa kwelanga.'
Ngoku lelo xesha lintathu Ukuthengisa ukutshona kwelanga Ubethe ngokusesikweni iNetflix, sichithe ixesha elininzi sisoyika abarhwebi / iinkwenkwezi zokwenyani zeTV ezibonisiweyo kumdlalo.
Ukusuka kwisiqendu sokuqala kuthotho, kwacaca kwangoko ukuba yonke isamente ilungile (Kulungile, kakhulu) izityebi. Umrhwebi osisityebi, nangona kunjalo, nguChrishell Stause, ojoyine umboniso kwisizini yokuqala. Ke, yintoni ixabiso likaChrishell Stause? Siphula zonke iidethi.
Ifoto nguAxelle / Bauer-Griffin / Getty Izithombe
1. YINTONI I-CHRISHELL STAUSE'S NET WORTH?
Ngoku ka Ubuninzi boLuntu lweNet , malunga ne- $ 5 yezigidi.
Kwaye ngelixa esandula ukwaziwa ngendima yakhe kwiNetflix's hit reality show (ndingasathethi ke, uqhawulo-mtshato lwakutsha nje kuJustin Hartley-ngakumbi emva koko), ayingabo bonke ubutyebi bakhe obuvela ekubeni ngumlawuli. Nangona kunjalo, siza kuqala apho.
Iposi ekwabelwana ngalo nguChrishell (@ chrishell.stause) Nge-Jul 24, 2020 ngo-11: 16 am PDT
2. 'Ukuthengisa ukutshona kwelanga'
Olu luhlu, olulandela abasebenzi be-brokerage yokuthengisa izindlu nomhlaba eLos Angeles, iQela le-Oppenheim, lamkele iStuse ngexesha lonyaka njengokongeza okutsha kwiofisi. Ngaphandle kokufika nje, uzenzele igama.
Ukusukela ukujoyina iQela le-Oppenheim, uStuse uthengise intaphane yamakhaya ezigidi zeedola, kunye nekhomishini kumashumi amawaka. Ukunyaniseka, ayizizo zonke iikhomishini ezinokuthi ziye ngqo epokothweni yakhe.
Iposi ekwabelwana ngalo nguChrishell (@ chrishell.stause) Nge-Jul 22, 2020 ngo-10: 02 am PDT
3. Ukwenza kwakhe
Ngelixa ngokuqinisekileyo ezibonakalise njengomthengisi, ukwanomsebenzi wokubambela onomdla.
Ngaphambi Ukuthengisa ukutshona kwelanga , UStuse uchithe iminyaka emininzi njengomdlali weqonga opera ebonakala kwimiboniso efana ne Bonke abantwana bam (apho wayenenkwenkwezi njengoAmanda Dillon ukusukela ngo-2005 ukuya ku-2011), Abancinci kunye nabangenakuphumla kwaye Iintsuku Zobomi Bethu.
Kwaye nangona singazi ngokuqinisekileyo ukuba loluphi uhlobo lwemali awayeyenza ngelo xesha, Umboniso weCheatsheet Iingxelo zokuba imivuzo yale miboniso ingaqala naphi na phakathi kwe- $ 450 ukuya kwi- $ 1,000 kwisiqendu ngasinye.
Inzalelwane yaseKentucky ikwavele kwiifilimu Isigqumathelo seCrimson, elinye ixesha kwaye Intombazana yam encinci ihambile.
Iposi ekwabelwana ngalo nguChrishell (@ chrishell.stause) NgoJuni 19, 2019 kwi-11: 02 am PDT
4. Umtshato wakhe
Kuze kube kutshanje, inkwenkwezi eneminyaka engama-35 ubudala yayitshatile Sithi aba Umlingisi uJustin Hartley (ixabiso lakhe liqikelelwa kwindawo ethile ejikeleze i-7 yezigidi zeedola). Ngapha koko, ukuwa komtshato wesibini kuyadlala ngexesha lokuphela Ukuthengisa ukutshona kwelanga ixesha lesibini kunye nexesha lesithathu.
Akukho lizwi kwindlela uqhawulo mtshato oluya kuyichaphazela ngayo imali yabo. Kodwa ngethamsanqa, bobabini babonakala ngathi benza kakuhle ngokwabo.
ZIQHELEKILEYO: 'Lucifer,' 'Les Miserables' nayo yonke into eyenye eza kwiNetflix ngo-Agasti 2020
Izigaba Ukuhla Ukusinda Abahlobo Nosapho Impilo
indlela elula ebomini
izibonelelo zokutya iiamangile ezifakwe emanzini
iinwele ezisika imifanekiso yamanenekazi
crunches zokunciphisa amafutha esiswini
leo ukuhambelana neminye imiqondiso